ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသည်တာမာအမည်ရှိသော, နှစ်ခုစလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏ခံစားခဲ့ရခဲ့ကြသည် တားမြစ်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ ။ အဘယ်ကြောင့်ဤအအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးအဘယ်ကြောင့်သူတို့သမ္မာကျမ်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသလဲ
ဤမေးခွန်းများကိုအဖြေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးထုတ်ဖေါ် အပွစျရှိ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုယူနှင့်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုသို့လှည့်နိုင်သူတစ်ဦးဘုရားသခင်အကြောင်းသဘောသဘာဝအဖြစ်။
ယုဒအမျိုးတဆယ်နှစ်လုံးကိုအမြိုးသားတစျခုဖွစျသညျ ကိုယာကုပျ ။ သူကဦးဆောင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်တမျိုးကို သူ့နောအမည်ရှိ။
ဧရ, သြနန်နှင့်ရှာလ: ယုဒအမျိုးသားသုံးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဧရအသက်ရောက်လာသောအခါ, ယုဒဧရနှင့်တာမာအမည်ရှိသောခါနာန်မိန်းကလေးအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားစီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျမ်းစာလာသညျဘုရားသခငျသူ့ကိုသတ်နိုင်အောင်ဧရ "ထာဝရဘုရား၏မျက်မှောက်၌မတရားသောသူ" လို့ပြောပါတယ်။
ဂျူးဥပဒေအရသြနန်တာမာကိုလက်ထပ်ဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်သူမ၏ကလေးများရှိသည်, ဒါပေမယ့်သားဦးမယ့်အစားသြနန်၏ဧရမယ့်လိုင်းအောက်မှာပါလိမ့်မယ်။ သြနန်သည်သူ၏ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့ပါဘူးအခါ, ဘုရားသခငျသညျအစသေလွန်သောသူတို့သည်သူ့ကိုလုပ်ကြံလေ၏။
သူတို့အားနှစ်ခုခင်ပွန်း၏သေဆုံးမှုသည်အောက်ပါယုဒပြည်သည်သူ၏တတိယသား, ရှာလ, သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်လုံလောက်သည်အသက်သည်အထိသူမ၏ဘ၏အိမျသို့ပွနျသှားဖို့တာမာအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရှာလသည်အသက်ရောကျ လာ. , ဒါပေမဲ့ယုဒပြည်သည်ဂတိတော်အားချီးမြှောက်မပေးခဲ့ပါဘူး။
တာမာသည်ယုဒပြည်သူ့သိုး sheared ရှိသည်ဖို့တိမနတ်ခရီးသွားခဲ့ကွောငျးသင်ယူသည့်အခါသူမသည်လမ်းအပေါ်သူ့ကိုကြားဖြတ်။ သူမသည်သူမ၏မျက်နှာကိုဖုံးနှင့်အတူလမ်းဘေးနားမှာထိုင်။ ယုဒပြည်သည်တစ်ဦးကိုပြည်တန်ဆာအဘို့သူမ၏မှား, သူမ၏အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ သူကသူမ၏နှင့်အတူလိင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာငွေပေးချေမှုဆီသို့အပေါင်အဖြစ်သူ၏တံဆိပ်တံဆိပျ, တစ်ကြိုး, သူ၏န်ထမ်းများကိုပေးတော်မူ၏။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်သူ၏သမီး-In-ဥပဒတာမာကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ကြောင်းသည်ယုဒပြည်သို့ရောက်ကြ၏။ & Furious သူသူမ၏သူမ၏အဘို့မီးရှို့ပစ်ရှိသည်ဖို့နှုတ်ဆောင်ခဲ့ဖူး မတရားသောမေထုန် , ဒါပေမယ့်သူမဟာတံဆိပ်, ကြိုးများနှင့်ဝန်ထမ်းများထုတ်လုပ်သောအခါယုဒအမျိုးကိုသူကအဖေဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက်လာတယ်။
ရာစုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက် ဘုရင်ဒါဝိဒ် သည်လည်းတာမာအမည်ရှိသောအဆင်းလှသောသတို့သမီးကညာ, ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်သည်အများအပြားမယားသောကြောင့်, တာမာအများအပြားတစ်ဝက်ကညီအစ်ကိုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အာမနုန်အမည်ရှိတစ်ခုမှာသူမရဲ့ရူးနေပြီဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူနေမကောင်းဖြစ်ဟန်ဆောင်အဖြစ် conniving မိတျဆှေ၏အကူအညီနှင့်အတူ, အာမနုန်ကသူ့ကိုထိန်းဖို့တာမာတယ်။ သူမအိပ်ရာအနီးရောက်လာသောအခါသူကသူမ၏သိမ်းဆည်းရမိနှင့်သူမ၏အဓမ္မပြုကျင့်။
ချက်ချင်းတာမာများအတွက်အာမနုန်၏မတ်ေတာတျောကိုမုန်းလှည့်။ သူကသူမကိုနှငျထုတျ။ စိတ်မသာညည်းတွားမှာတော့သူမရဲ့အင်္ကျီကိုဆုတ်နှင့်သူမ၏ခေါင်းပေါ်မှာပြာကိုထားတော်မူ၏။ အဗရှလုံ , သူမ၏အပြည့်အဝအစ်ကို, သူမ၏မြင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုသိနားလည်ကြ၏။ သူကသူ့အိမျသို့သူမ၏ယူခဲ့ပါတယ်။
နှစ်နှစ်အဘို့, အမျက်တော်ခဲ့ရသောအဆင်မပြေ, အဗရှလုံသည်သူ၏အချိန် bided ။ သိုးမှေးကိုပွဲတော်မှာ, သူသည်မိမိအပြောင်းအရွေ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတက်ရောက်ရန်ဘုရင်ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏သားတို့သဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည်ငြင်းဆန်သော်လည်း, သူကအာမနုန်နှင့်အခြားအမြိုးသားတို့သွားကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အာမနုန်စပျစ်ရည်နှင့်ပယ်ကိုယ်ရံတော်သောက်စဉ်အခါ, အဗရှလုံအာမနုန်ကိုသတ်သောကျွန်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဝိဒ်၏အမြိုးသားတို့၏ကျန်လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့လားလွတ်ပြေး၏။
သူ၏နှမတာမာ avenging ပြီးနောက်အဗရှလုံရှိသုံးနှစ်ကကျန်ရှိသော, ဂေရှုရပြေးကြ၏။ နောက်ဆုံးတွင်အဗရှလုံသည်ယေရုရှလင်မှပြန်လာသောနှင့်အချိန်ကိုကျော်ကသူ့ဖခင်နှင့်အတူ ပြန်. ။ သူကသူတို့တိုင်ကြားချက်တွေကိုနားထောင်နေသောကြောင့်အဗရှလုံသည်မကြာမီလူတို့နှင့်အတူတစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကဘုရင်ဒါဝိဒ်ဆန့်ကျင်တဲ့ပုန်ကန်မှုဦးဆောင်တိုင်အောင်သူ့မောက်မာကြီးပွားသတည်း။
တစ်ဦးသည်စစ်တိုက်စဉ်အတွင်းဗရှလုံ၏ရှည်လျားသောဆံပင်သည်သူ၏မြင်းကိုချွတ်သူ့ကိုဆွဲ, အပင်တစ်ပင်၏အကိုင်းအခက်များတွင်ဖမ်းမိတယ်။ သူကအကူအညီမဲ့အဲဒီမှာချိတ်ဆွဲထားသကဲ့သို့တစ်ဦးရန်သူစစ်သားသူ၏စိတ်နှလုံးသို့သုံးလှံထိုး။ ဆယ်ပါးလုလင်တို့သည်သေလွန်သောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုသပိတ်မှောက်, ဓားတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။
ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်, ယုဒသည်မိမိလိုင်းပေါ်တွင်သယ်ဆောင်ရန်, သူတို့ရဲ့သားဦးနှင့်အတူ, သူ့မုဆိုးမကိုလက်ထပ်ဖို့လူသားရဲ့တစ်ကိုယ်ရေအစ်ကိုလိုအပ်သောအရာ levirate လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ပညတ်တရားကိုမှသေလွန်သောသူတို့သည်အစ်ကိုများ၏ဥပဒေရေးရာအမွေဆက်ခံသူတက်မရှငျခဲ့ပါဘူး။
ဘုရားသခငျသညျဧရနှင့်သြနန်သေပြီလှုပ်ခတ်ခဲ့ချိန် မှစ. ယုဒပြည်သည်တာမာကနေသူ့ကိုကိုသိုထားသောလွန်းရှာလရဲ့ဘဝအတှကျအကွောကျရှံ့ခဲ့ကြပေမည်။ သူကအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအတွက်ပြစ်မှားကြ၏။ ယုဒအမျိုးကိုသူတစ်ဦးကိုပြည်တန်ဆာခဲ့ယူဆအမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့နှင့်အိပ်ပျော်သောအခါသူကသူသည်သူ၏သမီး-In-ဥပဒသောကြောင့်ပိုဆိုး, အပြင်ပြစ်မှားကြ၏။
ဒါတောင်မှဘုရားသခင်သည်လူများ၏အပြစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထဲမှာတွေ့မြင် မဿဲ တာမာရဲ့အမွှာသားတို့၏တဦးတည်း, ဖာရ, တစ်ဦးဘိုးဘေးခဲ့တာ 3: 1 ယေရှုခရစ်သည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသော ။ ထဲမှာ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအုပ် , ယရှေု "ယုဒအမြိုး၏ခြင်္သေ့" ဟုခေါ်သည်။ ဖာရမေရှိယ၏ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးသယ်ဆောင်နှင့်သူ၏မိခင်, တာမာသည်တှငျဖျောပွထားမှသာငါးအမြိုးသမီးမြား၏တစျခုဖွစျသညျ ယေရှုခရစ်၏စာရင်းဝင် ။
ဒုတိယတာမာနှင့်အတူအခြေအနေကဘုရင်ဒါဝိဒ်အဘို့ပိုပြီးဝမ်းနည်းခြင်းအတွက်အဆုံးသတ်ရေး, ဆိုးသည်ထက်ဆိုးတယ်။ ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်တာမာမုဒိမ်းကျင့်ဘို့အာမနုန်အပြစ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်အရာပေါ်မှနျးနိုငျသညျ။ ကြောင်းကျေနပ်မှုဗရှလုံ၏အမျက်တော်ရှိပါ့မလား ဒါကြောင့်အာမနုန်ရဲ့လူသတ်မှုတားဆီးကြမလား? ထိုသို့ပုန်ကန်မှုများနှင့်ဗရှလုံ၏အသေခံတားဆီးကြမလား?
တချို့ကကမျြးစာကပညာရှင်တွေကိုပြန်လည်နှင့်အတူဒါဝိဒ်၏အပြစ်တရားမှအဖြစ်ဆိုးခြေရာကောက် ဗာသရှေ ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဒါဝိဒ်ကိုသူအာမနုန်ရဲ့တပ်မက်မှာဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ဒေါသထွက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ မည်သည့်နှုန်းကိုမှာဇာတ်လမ်းအပွစျကိုမမြင်နိုင်တဲ့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအထိအကြိုးဆကျရှိပါတယျပြသထားတယ်။ ဘုရားသခငျသညျအပွစျကိုခှငျ့လှတျ , ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ aftereffects ကြောက်မက်ဘွယ်သောနိုင်ပါတယ်။
မာရိသညျ McLeod Bethune Quotes
ထိပ်တန်းအခမဲ့ Rap ဂီတတူရိယာများနှင့် Beats ဆိုဒ်များ
အဆိုပါခြင်း Green ရဲ့ခါးစညျးရှေ့ဖုံး
တောင်တက် Handholds ကိုးအခြေခံပညာအမျိုးအစားများ
ဝီလျံအဒမ်စ Fast Facts
မိုးလေဝသ Vane နှင့်လေတိုက်နှုန်းကို Socks: အပြင်အဆင်နှင့်ဒါအများကြီးပို
ဂတ်စ် Pump ကိုင်တွယ်လက်အောက်တွင် Hidden တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ထားတဲ့မြို့ပြဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအ Are
V ကို - အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများမှာ